किनेको ४५ दिनमै मोटरसाइकल चोरी भएर पुनः भेटिएपछी.... - Pahilo Click
January 2, 2021 |Pahiloclick
काठमाडौँ: शुक्रबार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा भेटिएका काभ्रेका ध्रुव बोलखे निकै खुसी देखिन्थे। हातमा हेलमेट थियो। उनी त्यहाँ कसैलाई कुर्दै थिए।
केही समयपछि महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जनक भट्टराई बोलखे भएनजिकै आए। भट्टराईलाई देखपछि झनै बोलखेको अनुहारमा खुसी देखियो।
एसएसपी भट्टराईले बोलखेको हातमा रहेको कागजपत्र हेरे।
‘अबदेखि लापरबाही तरिकाले जहाँ पायो त्यहाँ नराख्न‌ू। ह्यान्डल लक गर्ने बानी बसाल्नू,’ भट्टराईले बोलखेलाई सम्झाउँदै थिए।
बोलखेले पनि ‘हस्’ भन्दै धन्यवाद दिए।
कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका बोलखे कालोपुलमा डेरा गरी बस्थे। कुखुरा बोक्न सजिलो हुने भन्दै २७ कात्तिकमा बोलखेले २२० सिसिको पल्सर मोटरसाइकल किने।
किनेको ४५ दिनमा अर्थात पुस ११ गते मोटरसाइकल चोरी भयो। राति घरमा सुतिरहेको मौकामा ह्यान्डल लक गरिराखेको बा. प्र. ०२-०२० प ८७७९ नम्बरको आफ्नो मोटरसाइकल चोरी भएको महाशाखामा भेटिएका बोलखेले बताए।
बिहानै कुखुरा बोकेर ठाउँ-ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले बोलखे ४ बजे उठ्थे। ‘उठेर कोल्ड स्टोर जानको लागि मोटरसाइकल हेर्दा घरमा राखेको ठाउँमा थिएन,’ बोलखेले भने, ‘त्यसपछि १०० मा फोन गरेर प्रहरीलाई जानकारी गराएँ।’
नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन सुझाव आयो। ‘त्यसपछि निवेदन दिन प्रहरी कार्यालय पुगेको के मात्र थिएँ मोटरसाइकल भेटिएको खबर पाएँ,’ बोलखेले भने, ‘बौद्धस्थित नारायणटारबाट माथि जंगलमा बेवारिसे अवस्थामा मोटरसाइकल भेटिएको खबर ट्राफिक प्रहरीले नै सुनाए।’
त्यसपछि बोलखेले प्रहरीमा निवेदनसमेत दिएनन्। तत्कालै ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेर ल्याई राखेको ठाउँ पुगे। ‘प्रहरीले देखाएको मोटरसाइकल आफ्नै थियो,’ बोलखेले भने।
महाशाखा प्रमुख भट्टराईले नारायणटारमाथि जंगलमा फेला परेको मोटरसाइकल आज बोलखेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न मितिमा चोरी भई फेला परेका २२ मोटरसाइकल सम्बद्ध धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
बोलखेको मोटरसाइकल साँखु हुँदै सिन्धुपाल्चोकतिर लैजान खोजेको हुनसक्ने बताउँदै एसएसपी भट्टराईले भने, ‘त्यहाँबाट कटाउन नसकेपछि झाडीमा फालेको हुनसक्छ।’
चाबीको तार काटेर बोलखेको मोटरसाइकल चोरी गरेको भट्टराईले बताए। ‘चाबीको तार काटेर लक तोडेर मोटरसाइकल चोरी भएको देखिन्छ। अरू सबै ठिक छ,’ भट्टराईले भने।
१७ दिनमा ११० निवेदन
महाशाखाका अनुसार दिनमा ६ देखि सातवटा मोटरसाइकल चोरी हुने गर्छ। पछिल्ला १७ दिनमा मोटरसाइकल चोरीका १ सय १० निवेदन परेको एसएसपी भट्टराईले जानकारी दिए।
जसमध्ये ३९ वटा मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको भट्टराईले बताए। यस्तै मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न नाैजनालाई ट्राफिक प्रहरीले पक्रन सफल भएको छ।
तीन महिनाभित्र संसद पुनर्स्थापित हुन्छ : योगेश भट्टराई
अन्ततः अमेरिका डब्लूएचओबाट औपचारिक रूपमै अलग्गियो
नेकपाको गर्मागर्मी सचिवालय बैठक सहमतिमै शुक्रबार बस्ने
जनताको धैर्यताको बाँध टुट्न नदिन वृद्ध भत्ता र तलब वृद्धि, सांसदलाई ६ करोड : अर्थमन्त्री